Huawei nova 7i ကိုအရွယ်အစား ၆.၄လက်မ Resolution ၁၀၈၀× ၂၃၁၀ Pixels အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Main Camera 48MP/8Mp/2MP/2MP နှင့် Selfie Camera16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm သုံးထားတာကြောင့် ရုပ်ထွက်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ထရီ 4200mah Fast charging 40W, 70% in 30 min (advertised) ဖြစ်တာကြောင့်အားဝင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Colours ပိုင်းမှာတော့ Midnight Black, Crush Green, Sakura Pink တို့ကဲ့သို့အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် 2.0, Type-C 1.0 ပြောင်းပြန် connector, USB On-The-Go ပါဝင်သည်။
Huawei Mate 30Pro (8/256GB)
Huawei Mate 30 Pro မှာတော့Ph Battery က 4500 mAh ပါဝင်တာကြောင့် 15 မိနစ် အားသွင်းရုံနှင့် 37% အထိရောက်နိုင်ပါတယ်။Secreen size မှာဆိုရင် ၆.၅၃လက်မရှိပီးတော့ Screen ရဲ့ Curved Edges ကြောင့် ပိုပီးဆန်းသစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ game ဆော့ရတာပိုပီး အားရစေမှာပါ။ RAM 8 Gb နဲ့ Android version က 10 ရှိတာကြောင့် Game အားလုံးနီးပါးကိုအေးအေးဆေးဆေး ဆော့လို့ရနိုင်ပါတယ်။Main Camera ကို40MP / 8MP နှင့် Selfie Camera 32MP သုံးထားတာကြောင့်ရုပ်ထွက်တွေလဲပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Huawei Y7p မှာဆိုရင် secreen size 6.39လက်မဖြစ်ပါတယ်။Resolution ကတော့ 720×1560 pixels,19.5;9 ratio ရှိပါတယ်။RAM 4/64GBသုံးထားပီးတော့ Camera မှာဆိုရင် 48/8/2MPသုံးထားပါတယ်။ဘက်ထရီကတော့ 4000mah ပါဝင်ပါတယ်။Colours ပိုင်းမှာတော့ Aurora Blue, Midnight Blackတွေရှိပါတယ်။
Huawei Mate 30Pro 5G (8/256GB)
Huawei Mate 30 Pro မှာတော့ Battery အနေနဲ့ 4500 mAh ပါဝင်တာကြောင့် 15 မိနစ် အားသွင်းရုံနှင့် 37% အထိရောက်နိုင်ပါတယ်။Secreen size မှာဆိုရင် 6.53 inch ရှိပြီးတော့ Screen ရဲ့ Curved Edges ကြောင့် ပိုပြီးဆန်းသစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ game ဆော့ရတာပိုပြီး အားရစေမှာပါ။ RAM 8 Gb နဲ့ Android version က 10.0. ရှိတာကြောင့် Game အားလုံးနီးပါးကိုအေး အေး ဆေးဆေး ဆော့လို့ရနိုင်ပါတယ်။Main Camera ကို 40MP သုံးထားတာကြောင့်ရုပ်ထွက်တွေလဲပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Huaewi T3 7" (2/16GB)
Huawei MediaPad T3 Screen Size အနေနဲ့7.0 inch ရှိပြီး Display Type ကတော့ IPS LCD ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ RAM 2GB နဲ့ ROM 16GB ရှိပြီး Battery ကတော့ 4800mAh ပါဝင်ပါတယ်။ Main Camera အနေနဲ့ 5MP နဲ့ Selfie Camera 2MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Huawei M3 2017 (4/64GB)
Huawei M3 2017 Tablet တွင် Screen Size အနေနဲ့ 8.4 inch ရှိပြီး Display Type ကတော့ IPS LCD ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ RAM 4GB နဲ့ ROM 64GB ရှိပြီး Battery ကတော့ 5100mAh ပါဝင်ပါတယ်။ Main Camera အနေနဲ့ 8MP နဲ့ Selfie Camera 8MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Huawei Y8p (6/128GB)
Huawei Y8P မှာဆိုရင်တော့ 6GB RAM နဲ့ 128 GB internal storage ရှိပါတယ်။ Huawei Y8P စမတ်ဖုန်းတွင်OLED capacitive touchscreen ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Resolution အနေနဲ့ 1080 x 2400 pixels သိပ် သည်းဆရှိပါတယ်။ Main Camera 48MP/ 8MP/ 2MP နှင့် Selfie Camera 16 MP, f/2.0 သုံးပေးထားပါတယ်။ ဘက်ထရီ 4000 mAh Charging 10W ဖြစ်ပါတယ်။Colours တွေကတော့ Breathing Crystal, Midnight Black လာပေးထားပါတယ်။
Huawei Y5P မှာဆိုရင်တော့ 2GB RAM နဲ့ 32 GB internal storage ရှိပါတယ်။ Huawei Y5p စမတ်ဖုန်းတွင် LCD မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်တွင် Resolution 720×1440 pixels ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။Main Camera 8MPနှင့် Selfie Camera 5MP, f/2.2 သုံးပေးထားပါတယ်။ ဘက်ထရီ 3020mAh ပါဝင်ပြီး Colours တွေကတော့ Mint Green, Midnight Black, Phantom Blue လာပေးထားပါတယ်။
Huawei Y6p မှာဆိုရင်တော့ 4GB RAM နဲ့ 64GB internal storage ရှိပါတယ်။ Huawei Y6p စမတ်ဖုန်းတွင် LED flash, HDR, panorama မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ Resolution အနေနဲ့ 720 x 1600 pixels ရှိပြီး Main Camera 13MP/ 5MP/ 2MP နှင့် Selfie Camera 8MP, f/2.0 သုံးပေးထားပါတယ်။ Battery 5000mAh Charging 10W ဖြစ်ပါတယ်။ Colours တွေကတော့ Phantom Purple, Emerald Green, Midnight Black လာပေးထားပါတယ်။
Huawei X Monster Eyewear ကတော့ UV Protection ပါဝင်တဲ့အပြင် မျက်မှန်ကိုင်းမှာ Touch Sensor ၊ ဖုန်းပြောလို့ရမယ် ၊ ဖုန်းကိုင်လို့ရမယ် ၊ သီချင်းနားထောင်လို့ရမယ် ၊ သီချင်းကျော်လို့ရမယ် ၊ ရပ်လို့ရမယ် အပြင် မျက်မှန်ကိုအားသွင်းနိုင်မယ့် Charging Case တွေပါဝင်ပါတယ်။
Huawei MatePad Pro (6/128GB)
Huawei MatePad Pro တွင် Screen Size အနေနဲ့ 10.8 inch ရှိပြီး Display Type ကတော့ IPS LCD ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ RAM 6GB နဲ့ ROM 128GB ရှိပြီး Battery ကတော့ 7250mAh ပါဝင်ပါတယ်။ Main Camera အနေနဲ့ 13MP နဲ့ Selfie Camera 8MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ အားဝင်မြန်တဲ့ Fast Charging 15W ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။
Huawei MatePad T 8" (2/32GB)
Huawei MediaPad T3 တွင် Screen Size အနေနဲ့ 8 inch ရှိပြီး Display Type ကတော့ IPS LCD ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ RAM 2GB နဲ့ ROM 32GB ရှိပြီး Battery ကတော့ 5100mAh ပါဝင်ပါတယ်။ Main Camera အနေနဲ့ 5MP နဲ့ Selfie Camera 2MP ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Huawei 10000mAh Power Bank (Quick Charge)
Huawei ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 10000mAh Power Bank လေးကတော့ Quick Charge ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပြီး Body သေးသေးလေးဖြစ်တာကြောင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူနိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Quick Charge ဖြစ်တာကြောင့် အချိန်သိပ်ပေးစရာ မလိုဘဲ အားပြည့် နိုင်တာကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အကြိုက်တွေ့နိုင်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
5000mAh Power Bank လေးကတော့ Huawei က ထုတ်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။USB, Micro Ports ပါဝင်တာကြောင့် အားသွင်းချိန်တွေမှာလဲ အဆင်ပြေ လွယ်ကူစေမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei FreeBuds3နဲ့သီချင်းနားထောင်ကြမယ်... ထူးခြားပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ Huawei FreeBuds3ကိုဝယ်ယူလို့ရနေပါပီ... သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်ပုံစံကတော့ သေးသေးသွယ်သွယ်၊ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ Charging Case ကလည်းစက်ဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့ပါ။ နားကြပ်ရဲ့ Dolphin Bionic Desgin လေးကြောင့်လည်းနားထဲမှာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေဦးမှာ ဖြစ်သလို ခန့်ခန့်ညားညားနဲ့ စတိုင်ကျစေမှာအသေချာပါပဲ။
Speedport LTE II B593S-12
Huawei မှထုတ်လုပ်လိုက်သော Speedport LTE II B593S-12 သည် 3G 4G စသော Sim card များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Speedport LTE II B593S-12 ၏ setting များကို 192.168.8.1 စသော IP Address ကို Browser တွင်ရိုက်ထည့်၍ ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MIMO အင်တနာကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်အတွက် SMA Connector နှစ်ခုလည်းပါရှိပါသေးတယ်။ 3G Network တွင် 43 Mbps အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 4G Network တွင် 100 Mbps အထိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝိတ်ချတော့မယ်...ဝိတ်ချတော့မယ် ပေါင်ချိန် ၁၉၀....ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတော့ဟုတ်ဘူးဗျ...ဝိတ်ချမယ်ဝိတ်ထိန်းမယ်ဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်း ဝိတ်တက်လာပြီး လိုချင်တဲ့ Body ကိုမရဘူးဖြစ်နေလား ?ကိုယ့်ရဲ့ Body ကိုထိန်းညှိပြီး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ Linn IT & Mobile Mart ဆိုင်များမှာ Huawei Body Fat Scale ကိုဝယ်ယူလို့ရနိုင် ပါပြီခင်ဗျာ!!
Huawei E1220 mobile Broadband
Ultra Stick SPCI standard interfaces များကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ကုန်သည် အလွန်သေးငယ်ပြီး HSUPA / HSDPA / WCDMA: 2100 (900/850) MHz ကွန်ယက်စံနှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသောအခါ Ultra Stick SIM ကဒ်ကို SIM ကဒ်အထိုင်ထဲသို့ထည့်ပြီးနောက် Ultra Stick တက်ဘလက်အတွင်းပိုင်း interface ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Huawei Nova 7se 5G (8/128GB)
ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်း သစ်လွင်တဲ့ ပုံစံ နဲ့လာပေးထားတဲ့ Huawei Nova 7SE ရဲ့ Display size ကတော့ 6.5 inch ရှိပြီး Display Type မှာတော့ LTPS IPS LCD ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Resolution အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ 1080 x 2400 pixels ရှိပြီး Storage အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ RAM 8GB / ROM 128GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်၊၊ Battery အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 4000 mAh ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး အားဝင်မြန်စေတဲ့ Fast charging 40W ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။
Huawei Mate Book D14 Ryzen 7
Huawei MateBook D 14 ကို 1920 x 1080 IPS ဖန်သားပြင်နှင့်ထူးခြားစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ bezel များကို 4.8 mm အထိပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးနိုင်သဖြင့် 14 inch FullView မျက်နှာပြင်သည်အဆုံးမဲ့ မြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ HUAWEI MateBook D 14 သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည့် AMD Ryzen73700U processor3 ၏စွမ်းအားကိုအ သုံးပြုထားသည်။ PCIe SSD တပ်ဆင်ထားပြီးdual-channel architecture DDR4 RAM တွင် 16GB အထိထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် ၎င်း၏စာဖတ်နှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းသည်တဟုန်ထိုးမြန်ဆန်နေသည်။
Huawei Mate Book D14 Ryzen 5
Huawei MateBook D 14 ကို 1920 x 1080 IPS ဖန်သားပြင်နှင့်ထူးခြားစွာတပ်ဆင်ထားသည်။ အလေးချိန် 1.38 kg နှင့်အထူ 15.9 ml သာရှိသဖြင့်ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ screen ကို 180 Degree အထိ တွန်းနိုင်ပါသည်။ UAWEI MateBook D 14 ကိုShark Fin 2.0 ပန်ကာဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ထားသည်။လေကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီးအပူကိုလျော့ကျစေသည်။ 56Wh4 ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသဖြင့် အားတာရှည်အသုံးခံပါသည်။
Smart ကျကျလှပသေသပ်လှတဲ့ Design ၊Premium ဆန်တဲ့လက်ပတ်ကြိုး ပုံစံနဲ့ Huawei Watch Fit Smart watch လေးရဲ့ Display ပိုင်းမှာဆိုရင် 1.64 inches ရှိပြီးAMOLED Display ကိုသုံးပေးထားတဲ့အပြင် Resolution ကလည်း 280x456 HD ဆိုတော့ရွန်းစိုပြီးကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်အတွေ့အကြုံကို ခံစားရရှိစေမှာပါ။ပြီးတော့ Dual chipset architecture နဲ့ power-saving algorithms ကိုအသုံးပြုထားလို အချိန် ၁၀ ရက်ကြာအထိ နာရီကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Quick charge နည်းပညာကြောင့် အချိန် ၅ မိနစ်အားသွင်းရုံနဲ့ တစ်နေ့တာလုံးသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းအမြဲလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်၊ ဘာလိုလဲဆိုတော့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပေါင်း ၄၄ မျိုးကိုသရုပ်ပြထားတဲ့ အမျိုးအစားပေါင်း ၁၂ မျိုးကျော်ပြုလုပ်လိုရတဲ့ quick-workout နာရီမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် Stay home ကာလတွေမှာ smart watch နဲ့အတူ fit ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Huawei Nova75G (8/256GB)
ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်း သစ်လွင်တဲ့ ပုံစံ နဲ့လာပေးထားတဲ့ Huawei Nova75G ရဲ့ Display size ကတော့ 6.53 inch ရှိပြီး Display Type မှာတော့ OLED ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Resolution အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ 1080 x 2400 pixels ရှိပြီး Storage အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ RAM 8GB / ROM 256GB ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်၊၊ Battery အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 4000 mAh ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး အားဝင်မြန်စေတဲ့ Fast charging 40W ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။